ओली–नेपाल मिलनले राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचनमा विपक्षी गठबन्धनलाई धक्का
२०७८ जेठ २ आइतबार ०६:२२:००
देवकोटालाई उम्मेदवार बनाउने नेपालको प्रस्तावमा थियो, देउवा र प्रचण्डको समर्थन
केपी ओलीविरुद्ध गठबन्धन बनाउने सल्लाह र प्रदेशको अंकगणितसमेत हेरेर डा. खिमलाल देवकोटालाई गठबन्धनको उम्मेदवार बनाउने सहमति भएको थियो । उहाँले उम्मेदवारी कायम राख्नुभयो भने हामी उहाँलाई नै मतदान गर्छौँ । उहाँ मैदानबाट बाहिरिनुभयो भने बेग्लै कुरा हो ।
पार्टीको आन्तरिक विवाद समाधानउन्मुख देखिएपछि एमालेका तर्फबाट उम्मेदवार बनेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई ‘राहत’ भएको छ । तर, एमालेकै माधव नेपाल–झलनाथ खनाल समूहबाट प्रस्तावित भएका, तर स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका डा. खिमलाल देवकोटालाई कठिन अवस्था पैदा भएको छ ।
कांग्रेस, माओवादी र जसपाको डा. बाबुराम भट्टराई–उपेन्द्र यादव समूहको समेत समर्थन लिएर उम्मेदवारी दिएका डा. देवकोटाबारे खनाल–नेपाल समूहले लिने अन्तिम निर्णयले उनको हारजितको सुनिश्चितता गर्नेछ । ओली र नेपाल कार्यदल बनाएर पार्टी विवाद टुंग्याउन सहमत भएका छन्, जसले संघीय सरकार गठन गर्ने विपक्षी गठबन्धनको योजना असफल भएको थियो । स्रोतका अनुसार देवकोटालाई उम्मेदवार बनाउने नेपालको प्रस्तावमा देउवा र प्रचण्डले समर्थन गरेका थिए ।
तर, कांग्रेस नेता एनपी साउदले उम्मेदवारी फिर्ता नलिएसम्म आफूहरूले डा. देवकोटालाई नै मत दिने बताए । ‘केपी ओलीविरुद्ध गठबन्धन बनाउने सल्लाह र प्रदेशको अंकगणितसमेत हेरेर डा. देवकोटालाई उम्मेदवार बनाउने सहमति भएको थियो । उहा“ले उम्मेदवारी कायम राख्नुभयो भने हामी उहाँलाई नै मतदान गर्छौ“,’ उनले भने ।
विपक्षी गठबन्धन बचाउन भन्दै नेता नेपालले कांग्रेस र माओवादीसँग बागमती प्रदेशमा आफूले सिफारिस गरेको व्यक्तिलाई गठबन्धनको उम्मेदवार बनाउन प्रस्ताव गरेका थिए । केन्द्रमा वैकल्पिक सरकार गठनमा लागेका कांग्रेस र एमालेले खनाल–नेपाल समूहलाई विश्वासमा लिन आफ्नो उम्मेदारी दिएनन्, डा. देवकोटालाई नै साझा उम्मेदवार मानेका थिए । प्रतिबद्धता भए पनि केन्द्रमा निर्णायक अवस्थामा वैकल्पिक सरकार बनाउन खनाल–नेपाल समूहले असहयोग गरेको निष्कर्षमा पुगेका विपक्षी गठबन्धनका नेताहरूले राष्ट्रिय सभा उपचुनावमा पनि खनाल–नेपाल समूहको भूमिकालाई शंकाले हेरेका छन् ।
गठबन्धनका उम्मेदवार डा. देवकोटाको प्रतिक्रिया थियो, ‘म स्वतन्त्र उम्मेदवार हुँ । तर, मलाई कांग्रेस, माओवादी र जसपाको समेत समर्थन छ । सबै पार्टी मिल्नुपर्छ । देशमा स्थायित्वका लागि दलहरू मिल्न जरुरी पनि छ, तर त्यसले मलाई फरक पार्दैन ।’
यस्तो छ बागमतीको अंकगणित : गृहमन्त्रीलाई ‘राहत’, देवकोटालाई ‘जोखिम’
राष्ट्रिय सभाका स्वतन्त्र उम्मेदवार डा. खिमलाल देवकोटा भन्छन्– परिणाम जेसुकै आओस्, युद्धको मोर्चामा होमिसकेपछि लड्नुपर्छ
#राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचन
लुम्बिनीमा राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचन : आयोगले दियो उम्मेदवारलाई चुनावचिह्न
राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचन ः स्थानीय तहमा २५ मतान्तरले देवकोटा अगाडि
राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचनको मतदान सकियो, ९६ प्रतिशत मत खस्यो
विवेकशील साझाले राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचनमा मतदान नगर्ने